John Tyler | Iinkcukacha kunye neBriefography
UJohn Tyler, uMongameli we-10 we-United States
Mongameli uJohn Tyler. Kean Collection / Getty Izithombe
Ubomi bexesha: Uzalwe: Matshi 29, 1790, eVirginia.
Wafa: ngoJanuwari 18, 1862, e-Richmond, eVirginia, ngelo xesha i-capital of the Confederate States of America.
Ithuba likaMongameli: uEpreli 4, 1841-Matshi 4, 1845
Impumelelo: UJohn Tyler, owayekhethwe njengengumongameli weWilliam Henry Harrison ukhetho luka-1840 , waba ngumongameli xa uHarrison wafa ngenyanga emva kokuvulwa kwakhe.
Njengoko uHarrison wayengumongameli wokuqala waseMerika ukuba afe e-ofisi, ukufa kwakhe kwaphakamisa imibuzo emininzi. Yaye indlela eya kulungiswa ngayo loo mbuzo yenziwe mhlawumbi eyenziwa nguTyler omkhulu, okokuba ngenxa yokuba waziwa ngokuba nguTyler ngaphambi .
Xa ihabhinethi yaseHarrison yazama ukuvimbela uTyler ukuba asebenzise amandla akhe onke. IKhabhinethi, eyayiquka uDaniel Webster njengobhala wenarha, yafuna ukudala uhlobo lokwaba ngumbongameli okwabelwana ngalo apho kwikhabhinethi iya kufuneka ivume izigqibo ezinkulu.
UTyler wazichasa ngamandla. Wayegxininisa ukuba nguye kuphela owayengumongameli, kwaye ngenxa yoko wayenegunya elipheleleyo likaMongameli, kwaye inkqubo ayimise yaba yindabuko.
Ukuxhaswa ngu: UTyler wayebandakanyeke kwi-politics yeqela iminyaka engama-1840 ngaphambi kokhetho lwama-1840, kwaye wayenyuliwe njengommeli we-presidential candidate yi-Whig Party okhethwe ngo-1840.
Lelo phulo laliphawuleka njengoko kwakunyulo lokuqala likamongameli ukuba lube neempembelelo zeeprogram. Kwaye igama likaTyler lagqitywa kwesinye sezivakalisi ezidumileyo kwimbali, "iTippecanoe noTyler Too!"
Ukuchaswa nguTyler ngokuqhelekileyo wayephazamiseka ngubukhokeli be-Whig, naphezu kobukho bakhe kwiThikithi ye-Whig ngowe-1840. Kwaye xa uHarrison, owayengumongameli wokuqala we-Whig, efa ekuqaleni kwexesha lakhe, iinkokeli zeqela zaxakeka.
UTyler, kungekudala, wahlula ngokupheleleyo i-Whigs. Akazange enze nohlobo phakathi kweqela eliphikisayo, iiDemokhrasi. Kwaye ngexesha lokufika kokhetho luka-1844, wayesele ekhohliwe kungekho mbambano kwezopolitiko. Phantse wonke umntu kwikhabhinethi yakhe yashiya. I-Whigs ayiyi kumtyunjwa ukuba asebenzele elinye ixesha, ngoko ke wayethatha umhlala-phantsi eVirginia.
Iphulo likaMongameli: Ngenye imini uTyler wagijimela i-ofisi ephakamileyo kwimeko yonyulo ye-1840, njengokuba iqabane likaHarrison. Ngaloo xesha akafunanga ukukhankasela nangayiphi na indlela ebonakalayo, kwaye wayezama ukuzola ngethuba lonyaka wokhetho ukwenzela ukuba aphephe yonke into ebalulekileyo.
Umtshato kunye nosapho: UTyler watshata kabini, waza wazala abantwana abaninzi kunanoma yimuphi umongameli.
UTyler wazala abantwana abathathu nomfazi wakhe wokuqala, owafa ngo-1842, ngexesha likaTyler njengomongameli. Wabuye wazala abantwana abasixhenxe kunye nomfazi wakhe wesibini, umntwana wokugqibela ezalwa ngo-1860.
Ekuqaleni kweendaba zeendaba ze-2012 zabika imeko engaqhelekanga yokuba abazukulu bakaJohn Tyler basaphila. Njengoko uTyler wayebelethe abantwana ekupheleni komntwana, kwaye omnye wabafana bakhe naye, nabo badala babeyinzala yindoda eyayingumongameli iminyaka eyi-170 ngaphambili.
Imfundo: UTyler wazalelwa kwintsimi yaseVirginia ecebileyo, wakhulela kwindlu yokuhlala, waya kwiKholeji yaseGrithani yaseWilliam noMary.
Umsebenzi wokuqala: Njengomfana oseTyler owayenomthetho waseVirginia waza waba ngumsebenzi kwizopolitiko zombuso. Wasebenza nakwiNdlu yabameli be-US iminyaka emithathu ngaphambi kokuba abe ngurhuluneli waseVirginia. Wabuyela eWashington, emele iVirginia njengeSenator yase-US ukusuka ngo-1827 ukuya ku-1836.
Umsebenzi kamva: UTyler wasethatha umhlala-phantsi eVirginia emva kwexesha lakhe lokuba ngumongameli, kodwa wabuyela kwizopolitiko zwelonke emva koMkhosi weMfazwe. UTyler wancedisa ukulungelelanisa inkomfa yoxolo eyayibanjelwe eWashington, DC ngoFebruwari 1861, kwaye eyona nto yayingayithinteli iMfazwe Yomphakathi.
UTyler ube ngumnini wekhoboka kwaye wayenyanisekile kwiinkampani ezikhoboka ezazivukela urhulumente wephondo. Kwakukho ukuthetha ngaye ngokucwangcisa umzamo phakathi kwabangaphambili bamongameli ukuba bathinte uLincoln ukuba bavumelane neemfuno zaseMzantsi, kodwa akukho nto yavela kwisicwangciso.
UTyler wabambisana ne-Confederacy xa igosa lakhe laseVirginia lahlala, kwaye wanyulwa kwi-congrès ye-Confederate ekuqaleni kwe-1862. Nangona kunjalo, wafa ngaphambi kokuba ahlale esihlalweni sakhe, ngoko akazange akhonze kuRhulumente we-Confederate.
Isiteketiso: UTyler wayehlekwa usulu ngokuthi "Ulungelo Lakhe," njengoko wayeqwalaselwa, ngabaphambili bakhe, umongameli ongengozi.
Amaqiniso angavamile: UTyler wafa ngexesha leMfazwe Yomphakathi, kwaye wayekho, ngexesha lokufa kwakhe, umsekeli we-Confederacy. Ngaloo ndlela ubamba ukungafani okungaqhelekanga kokuba nguye kuphela umongameli owake wafa ngokubanjwe nguRhulumente waseburhulumenteni.
Ngokwahlukileyo, umongameli wangaphambili uMartin Van Buren , owafa ngaloo nyaka, ekhaya lakhe eNew York State, wanikezelwa udumo olukhulu, iiflegi zijikeleza kwisiqingatha sabasebenzi kunye nemikhosi ekhutshwe eWashington, DC
Ukufa kunye nomngcwabo: UTyler wayehlupheke kwizifo, ekholelwa ukuba yimiba yesifo somhlaza, ngexesha lokugqibela lokuphila kwakhe. Ekubeni egula, kusobala ukuba wayebethelwa yingozi kuJanuwari 18, 1862.
Wanikwa umngcwabo omkhulu eVirginia ngurhulumente we-Confederate, kwaye wayedunyiswa njengommeli weCompederate.
Ifa: Ulawulo lukaTyler lwaba nempumelelo embalwa, kwaye ilifa lakhe langempela liza kuba yiTyler Precedent , isiko apho i-vice-presidents ithatha igunya loongameli emva kokufa komongameli.
I-Second Invitation yaseBrithani yokuVala: uDave Clark ezintlanu